Sida loo noqdo aabe wanaagsan: tilmaamaha iyo dhinacyada | Ragga Stylish
Jarmal Portillo | | dhaqanka
Qofna ma oran waa aabbuhu wuu fududahay. Waxaa jira sifooyin ay ka mid yihiin jacayl, xushmad iyo adkeysi, kuwaas oo fure u ah kobcinta xiriir wanaagsan oo lala yeesho carruurta. Astaamahan awgood waxay noqon kartaa maalinta carruurta yaryari u baahan yihiin inay si buuxda ugu raaxaystaan ​​nolosha oo ay bartaan goorta ay sii weynaan doonaan. Waxaa jira rag badan oo aan aqoon Sida loo noqdo aabe wanaagsan. Sababtoo ah ma aaminsana inuu isagu leeyahay awood ku filan ama aysan u gudbin karin wuxuu rabo wiilkiisa.
Sidaa darteed, qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa xoogaa tilmaamo ah oo lagu baranayo sida loo noqdo aabe wanaagsan.
1 Sida loo noqdo aabe wanaagsan
2 Waxa la sameeyo si loo barto sida loo noqdo waalid wanaagsan
Qofna ma yaqaan sida loo noqdo waalid wanaagsan. Waxaa jira leexashooyin badan oo noloshu qaaddo nin walibana si uun buu u fasiri karaa. Siyaabo kala duwan oo waalidnimada ah ayaa la bixin karaa iyadoo kuxiran arrimo badan. Haddii aabbanimada waa la qorsheeyay mid ama haddii faracgu yahay dhiig ama la korsaday. Waxaa jira arrimo badan oo shardi kara waalidnimada hal dhinac ama mid kale. Marka laga gudbo shuruudaha aan soo sheegnay, waalidnimada ayaa door aad u muhiim ah ka ciyaareysa barbaarinta. Thanks to waalidnimada wanaagsan, carruurtu si wanaagsan ayey u kori karaan.
Si loo ogaado sida loo noqdo aabe wanaagsan, waxa ugu horeeya waa in la ogaado waxa hooyadu tahay. Maxbuusku wax kale ma aha oo waa aabe. Waa mid ka mid ah xaaladaha ku jira astaamaha lagu garto aqoonsiga lab. Waxay kuxirantahay dhaqamada qaarkood iyo doorarka jinsiga, aabaha wuxuu si toos ah uguxiranyahay wiilkiisa. Waa inaad fulisaa shaqooyinka qaarkood si aad u buuxiso baahiyaha ilmahaaga, in kasta oo had iyo jeer la sheego in hooyooyinku aad uga baahi badan yihiin, haddana aabbayaashu sidoo kale waa furaha aasaasiga ah ee qoyska.
Sida laga soo xigtay daraasadaha qaarkood, waalidnimadu waxay ku lug leedahay xiriiro badan iyo aagag barbaarinta. Xiriirradani waxay ka caawin doonaan shirkadda inay horumariso dhammaan. Waxaan arki doonnaa qaar ka mid ah waxyaabaha ay tahay in lagu sameeyo habka loo baranayo sida loo noqdo aabe wanaagsan:
Ku wadista jihada: Waxaa loogu tala galay in wiilkayaga loo jiheeyo wadada saxda ah si uu wax u barto qiyamka uguna noolaado bulshada
Jacayl, daryeel iyo waxbarasho: Abuuritaanka xiriir jacaylku ka jiro oo wiilka markabka la daryeelo Abuuritaanka waxbarasho waa wax adag. Si wax loo baro, mid waa inuu noqdaa mid adag oo aabuhu waa inuu noqdaa awood wiilka.
Barashada isweydaarsiga: Marka ay timaado barida ilmaheena, maahan kaliya, laakiin sidoo kale anaga, wuxuu baran doonaa dabeecadaha qaar.
Ciyaar iyo baashaal: nolosha oo dhami kuma salaysna edbin, laakiin sidoo kale waa inay u shubtaa saaxiib ciyaar iyo baashaal
Samaynta Aqoonsiga: waqtiga uu wiilka wax barayo waa inuu sameeyaa aqoonsi.
Xirfadaha iyo aqoonta bulshada: faahfaahinta cunugga waa suurtagal in lagu abuuro xirfado iyo aqoon gaar ah oo bulshada dhexdeeda ah
Qiimayaasha iyo waxa la aaminsan yahay: had iyo jeer waxaa la dhahaa in wiilka in waxyaalaha aabbihiis. Qiyamka likaha ee aan eegno farcankiisa ayaa aasaas u ah mustaqbalka. Sidoo kale waa run rumaysadka.
Waxa la sameeyo si loo barto sida loo noqdo waalid wanaagsan
Intii aan ka wada hadalnay waxaas oo dhan, waxaa jira kumanaan qaab oo aad u dhisi karto una kobcin karto xiriirka aad la leedahay ilmahaaga. Ujeeddadu waa in laga faalloodo laga bilaabo da 'yar oo lagaa sheego wax ku saabsan taranka oo dhan. Waxa ugu horreeya oo dhan waa in la muujiyo kalgacal. Wiilasha badanaa waxay raadiyaan jacaylka iyo kalgacalka waalidkood. Kuwani waa kuwo aad muhiim u ah maadaama ay jiraan kiisas dhalinyaro iyo dad waaweyn oo dhibaatooyin ku qaba noloshooda maxaa yeelay ma aysan helin jacaylka waalidkood ilaa carruurnimadoodii.
Carruurtu waxay u baahan yihiin in la maqlo lana dareemo jacayl. Carruurta waxaad u noqon doontaa sida munaarad ka difaacaysa dhibaatooyinka nolosha soo food saaray. Way fiicantahay in la tuso jacaylka yar yar adiga oo wakhti la qaadanaya iyaga oo samaynaya nashaad nooc kasta ah. Ma jiraan wax la barbardhigi karo inaad ku dhageysato kuwa aad jeceshahay oo aad ku jeceshahay codkaaga. Kaliya maahan in waqti badan la maro, laakiin waqti tayo leh. Uma qalanto xirnaanshahaaga adiga oo aan si joogto ah ula falgelin. Si aan u sii faahfaahino, waa inaan xasuusano markaan yaraynay. Waqtiga aan la qaadannay aabbeheen, haddii ay ahaan laheyd ciyaar, sheekeysi, wax kasta oo aan qabanayno, hubaal waa inaan u sameynaa wiilkeenna.
Carruurta, daqiiqad kasta oo lala qaato waalidiinta waa labanlaabmayaa tan iyo markii ay leeyihiin waayo-aragnimo cusub waxayna u tixgeliyaan inay tahay waqti muhiim ah. Sidaa darteed, waxaa fiican in la qorsheeyo oo laga faa'iideysto daqiiqad kasta si aad awood ugu yeelato inaad carruurtaada la qaadato. Intaa waxaa dheer, Waa muhiim in si dhab ah looga qayb galiyo nashaadaadka si aad u ogaatid una caawiso.
Waalidiintu wax walba ma yaqaanaan. Waa aasaas. Aabaha iyo hooyada labadaba waa in lagu wargeliyaa arrimaha ku saabsan korinta carruurta yar yar. Thanks to tiknoolajiyada hadda jirta, waxaan ku kasban karnaa macluumaad badan iyada oo loo marayo habab badan oo naga caawin kara qaybtaan nolosha. Waa muhiim in la naqdiyo marka la eego wixii aan aragnay maadaama ay jiraan macluumaad badan oo been noqon kara.
Mid ka mid ah dhinacyada aasaasiga ah ee barashada sida loo noqdo waalid wanaagsan waa gudbinta edbinta iyo jacaylka. Haddii aan xiriir dhow la yeelano wiilkaaga Don Punto, ujeeddada edbinta waa lumin kartaa. Waxaa jira talooyin, hagaajin xitaa Ciqaabta la siin karo si ilmuhu ugu fiicnaado nolosha oo uusan u daalin noloshaada ama niyad jab. Sidaa darteed, edbinta waa in lagu bartaa jacayl.
Waa inaadan waligaa maskaxda ka lumin inaad adigu tahay hagaha ilmahaaga. Haddii aad ka maqantahay sanaadiiqdaada, waxaa fiican inaad inyar sugto si aad u dejiso tan iyo markaas waad ka qoomameyn kartaa waxyaabaha qaarkood. Waa inaan ogaanno in carruurtu, in kasta oo ay korayaan oo ay qaan gaadhayaan, haddana aysan ahayn dad waaweyn.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku heli karto xoogaa faa'iidooyin ah si aad u baratid sida loo noqdo waalid wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » dhaqanka » Sida loo noqdo aabe wanaagsan